Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment श्रीलङ्का आक्रमण : विस्फोटन हुनुभन्दा केही समय अघि होटलबाट निस्किएका थिए यी नेपाली ! - Pnpkhabar.com
श्रीलङ्का आक्रमण : विस्फोटन हुनुभन्दा केही समय अघि होटलबाट निस्किएका थिए यी नेपाली !
श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बो र अन्य स्थानमा भएका शृङ्खलाबद्ध विस्फोटनमा विदेशी नागरिकहरू पनि परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। कोलम्बो अस्पतालले नौ विदेशीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ।
विभिन्न गिर्जाघर र होटलमा भएका विस्फोटनमा कम्तीमा १३७ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी र अस्पतालस्थित स्रोतले जनाएका छन्। तर श्रीलङ्कामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका सदस्यबारे अहिलेसम्म कुनै अप्रिय जानकारी नआएको र सबै सुरक्षित भएको हुन सक्ने श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूत विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।
दूतावासकी प्रथम सचिव धनकुमारी जोशीका अनुसार त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको एउटा समूहमा आफूहरू सुरक्षित भएको जानकारी दिएका छन्। हताहत भएका विदेशी नागरिकहरूको राष्ट्रियता भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
कोलम्बोमा बौद्ध भिक्षु, विद्यार्थी, व्यापारी र विभिन्न सेवाक्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू एवम् तिनका परिवारका सदस्यसमेत झन्डै चार सय नेपालीहरू भएको अनुमान नेपाली दूतावासको छ।
श्रीलङ्काभरि भने झन्डै एक हजार नेपालीहरू भएको बताइन्छ। यसैबीच नेपाल सरकारले श्रीलङ्कामा भएका विस्फोटनहरूको निन्दा गर्दै श्रीलङ्का सरकार र जनताप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको छ। श्रीलङ्कामा आइतवार साँझ छ बजेदेखि सोमवार बिहान छ बजेसम्म लागु हुनेगरी कर्फ्यू लगाइएको छ।
किनभने आइतवार बिहानको खाना खाएर निस्किएको ठाउँमा आधा घण्टापछि विस्फोटन भएको खबर उनले पाए। उनी डेढ महिना समयदेखि कोलम्बोस्थित साङ्ग्रिला होटलको अपार्टमन्टमा बस्दै आएका छन्। गौतम विगत १४ वर्षदेखि श्रीलङ्कामा व्यापार गर्दै आएका छन्। घटनाबारे थाहा पाएपछि उनले नेपाली दूतावासलाई आफू सुरक्षित भएको जानकारी दिए। उनी अहिले पेलियागोडास्थित कार्यालयमा छन्। बिबिसीबाट